Gịnị Bụ Mmemme Ngosipụta Ngosipụta Mmemme? | Martech Zone
Anyị ekenyela ihe mgbasa ozi mmemme bụ ma gbaa ajụjụ ọnụ onye isi njikwa ahịa ngwaahịa Adobe maka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi, Pete Kluge. Anyị akọwawo ya ezigbo oge bidding, usoro nke sistemụ mmemme iji nweta ohere mgbasa ozi site na netwọkụ mgbasa ozi.
Ndepụta ngwa ahịa abụghị naanị na netwọkụ mgbasa ozi. E nwekwara ọtụtụ nyiwe ebe ndị mgbasa ozi nwere ike ịzụta mgbasa ozi ozugbo na saịtị anyị. Isi ihe dị iche n’etiti mgbasa ozi mgbasa ozi anyị na netwọk mgbasa ozi bụ na anyị enweghị atụmatụ ịgba ọsọ oge ebe usoro ndị ahụ nwere ike ịkwado ụgwọ ọ bụla pịa. Kama nke ahụ, anyị ga-enwe ọnụego eburu n'uche na ndị ahịa ga-ekwenyekwa.
Kedu ihe nke ahụ pụtara? Ọfọn, data sitere na infographic a sitere na AdReady na-egosi na ntinye ọnụahịa na-ebute ọnụahịa 76% dị ala. Agbanyeghị, nke ahụ apụtaghị na ọ bụ ohere ka mma. Ngosiputa mgbasa ozi ngosi nwere ike iduga ngbanwe ntụgharị dị elu n'ihi ntinye ego - na-enyefe mkpọsa na-aga nke ọma.
Ihe omuma ihe ndia n’enye gi aka ka igha gha enyere gi aka ime ihe ngosi nke ihe nlere site na ikwalite oge iji gosiputa ihe ngosi gi.
Tags: mgbasa ozi mmemmeMmemme DirectProgrammatic Direct Mgbasa OziNgosipụta Ngosipụta MmemmeProgrammatic Direct Ngosipụta Mgbasa Ozi